Launcher | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Just For Laughs Gags 11 AUG 2015
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, August 12, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Launcher, ဟာသ
Buzz Launcher v1.7.1.05
android ဖုန်းတွေ အတွက် Buzz Launcher v1.7.1.05 ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
Buzz Launcher လေးကတော့ သုံးရတာ မြန်ဆန်မှု ရှိသလို ဒီ launcher လေး အတွက် theme တွေ ကလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။
ဘောလုံးပွဲကို ကြိုက်တဲ့ ဘော်ဘော်တို့ အတွက်လည်း မန်ယူ ချယ်ဆီး အစ ရှိတဲ့ ဘောလုံး ကလပ် အသင်းတွေရဲ့ theme တွေ ကိုလည်း ရယူနိုင် ပါတယ်။
file size 6.4MB ရှိပြီး android 4.0.3 ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Buzz Launcher is anad-free custom launcher that has more than800,000+ free themes(the largest number of free themes among launchers)! Freely download, apply,customize, share, and even create Homescreens! (Available from Android 4.0.3+)
•Customize so much more than just your wallpaper or theme.
•Change between multiple smooth, fast, and easy Transition effects.
•View all Homepacks inaglance NOW: http://www.homepackbuzz.com
•Apply new home screens atatouch ofabutton, instantly!
•Personalizeyour homescreen with robusticon, wallpaper editing features
•Downloadand implement completely free homescreens within5seconds!
•Share home screens withasingle touch via Facebook, Twitter, and Google+!
•Explore unique widget features such as clock, date, and battery•
Create your own customized widget using Buzz Custom Widget (Free)!•
Version : 1.7.1.05
Buzz Launcher v1.7.1.05 ကိုအောက်မှာ Free Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ Download Link နှစ်ခု ပေးထား ပါတယ် အဆင်ပြေမဲ့ Link တစ်ခုကနေ ဒေါင်းယူပါ။
▼ usersfiles.com ▼ OR ▼ solidfiles.com ▼
ကဏ္ဍ Android, Launcher, Phone Application
Window 8 ပုံစံ အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မယ့် - Androse 8 Pro – WIndows Clone v4.2 Apk
ဖုန်းထဲမှာ Window 8 လို ပုံစံမျိုး အသုံးပြု နိုင်တဲ့ Launcher အသစ်လေး တစ်ခု တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ လိုမျိုး Launcher တွေ အများကြီး တင်ပေးခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု တင်ပေး လိုက်တဲ့ Launcher လေးက အရင် တင်ပေး ခဲ့ဖူးတဲ့ Launcher တွေထက် အများကြီးကို ဆန်းသစ်ပြီး လှပ ပါတယ်။
အခု Version ကို လည်း တစ်ခါမှ မတင်ပေး ဖူးပါဘူး။ စမ်းသုံး ကြည့်စေ ချင်ပါတယ်။ သုံးရတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ စတိုင်လေး ကလည်း တော်တော် လေးကို လှပါတယ်။ Start Menu Bar တွေ နောက်ခံ Theme တွေ Icon တွေ အားလုံး ကအစ Window 8 OS ကို အခြေခံပြီး ဖန်တီး ထားတာဖြစ်လို့ တစ်မျိုးလေး ဆန်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Menu မှာလည်း များပြားတဲ့ Feature တွေ ပါဝင်လာ ပါတယ် ၊ Animations Effect လေးတွေ ပါဝင် တာကြောင့် ထူးထူး ခြားခြားလှပတဲ့ Launcher တစ်ခု ဖြစ်မှာပါ။ Launcher ရဲ့ စတိုင်လေး ကိုတော့ အောက်မှာ နမူနာ Screen Shot တွေ ပြထား ပါတယ်။
Android OS 4.0 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, April 10, 2015 No comments:
Launcher တွေထဲမှ အကောင်းဆုံးကို ရွေးမယ် ဆိုရင် IO Launcher (Lollipop + iOS 8) v+2.8 Apk
အခုမှ အသစ် စထွက် လာတဲ့ ဒီ Launcher Apk လေးက ဘယ်လောက်ထိ လန်းသလဲ ဆိုတာ ပုံလေးကို မြင်တာနဲ့
သဘော ပေါက်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီ ဆော့ဝဲလေးကို Smooth, Smart and Small, စတာ တွေကို အထူး ဦးစားပေးပြီး ရေးဆွဲ ထားတာမို့ အားလုံးတွေ ထဲက
perfect ဆိုတာကို သင် ပိုင်ဆိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Main Features အနေဖြင့် Function ပေါင်း ၁၂ ခုထက် မနည်း ပါဝင်နေ တာလည်း အသုံးပြု ကြမည့် သူတွေ အတွက် လုံးဝ ပြီးပြည့်စုံ စေမယ့် နောက်ဆုံး Technology တွေကို ပေး နိုင်စွမ်း ရှိတယ် ဆိုတာကို သက်သေ ထူနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ အထဲမှာ ပါဝင် လာတဲ့ Android Launcher ကိုတော့ Android Device တွေ အတွက် နောက်ဆုံးထွက် ထားတဲ့
Android Lollipop Version 5.0 ကို ရေးဆွဲ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ iOS 8 style Launcher လည်းကို ပေါင်းစပ် ထားတာ ဖြစ်လို့ သင့် အတွက် Launcher တွေထဲမှ အကောင်းဆုံး ဆိုတာကို ရွေးချယ် တော့မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီ Launcher လေး ကိုသာ အသုံးပြု ကြည့် လိုက်ပါလို့ အကြံပြု လိုက်ပါ တယ် ခင်ဗျား...
2.3 MB ပဲရှိပါတယ်။
4.0 အထက် ဖုန်းအားလုံးမှာ အဆင်ပြေပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, March 09, 2015 No comments:
ဒီဇိုင်း အသစ်နဲ့ Pale GO Launcher Theme
GO Launcher ဒီဇိုင်း အသစ်လေး Pale GO Launcher Theme လေးပါ ဒီဇိုင်းလေး က လန်းပြီး အရမ်း မိုက်တဲ့ Launcher လေးပါ ဒီဇိုင်းလေး ကြိုက်လို့ တင်ပေး လိုက်တာပါ။
▼ play.google.com ▼ OR ▼ 1mobile.com ▼ OR ▼ aptoide.com ▼
ကဏ္ဍ Android, Launcher, Phone Application, Theme
Launcher တွေထဲမှာ အလှပ ဆုံးနဲ့ မြန်ဆန်သွက်လက်ဆုံး တစ်ခုလို့ ဆိုရင် မှားမယ် မထင်ပါဘူး
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့....Google Play ရဲ့ Rating ထဲမှာ ကြယ် ၄ ပွင့် အဆင့်ထိ ရှိသလို..ဒေါင်း
လုပ်တဲ့ သူပေါင်း ဟာလည်း ၅သန်းကျော် နေပါပြီ....
မိမိရဲ့ ဖုန်းမှာရှိတဲ့ ဒီဇိုင်း အဟောင်း တွေက နှေးကွေးလေးလံ နေပြီဆိုရင်....ဒီ Apps လေးကိုသုံး
ကြည့်လိုက်ပါ...ဒီApps မှာပါတဲ့ အဓိက features တွေကတော့....အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်..
ပြီးတော့ ဒီ Launcher လေးဟာ တစ်ခြား Launcher တွေထက်..၅၅ ရာခိုင်နှုန်း Ram သက်သာစေ
ပါတယ်....ဒီ Application ကို ထည့်မယ် ဆိုရင်.. Android version 2.1 and up ရှိသူတွေ အားလုံး
သာမန် Launcher တွေထက် အမြင်ကော -စတိုင်ပါ လုံးဝ ထူးခြားစေမယ့် Launcher လို့ ပြောလဲ
မမှားပါဘူး ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ theme မျိုးစုံနဲ့ လှပနေအောင် သင်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်လို့ ရလို့
အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်ဖတ်လိုက်ပါနော် ။
Requires AndroidAndroid 4.1.2 or higher
ဆောင်းရာသီ ဒီဇိုင်း Outside GO Launcher Live Theme လေးပါ။
GO Launcher ဆိုထဲက လူကြိုက်များတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။
- Write or draw whatever you want on the home screen just like on the fogged-up window glass
- Enable / disable the foggy effect by touching the water drop in the upper right
Updated : September 18, 2014
ဒီဇိုင်းလန်းတဲ့ Hola Launcher - Simple & Fast
ဖုန်းထဲမှာ Launcher ကို ရိုးရိုး ရှင်းရှင်း မြန်မြန် ဆန်ဆန် သုံးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ခုတင်ပေးလိုက်
တဲ့ Hola Launcher v1.5.3 update လေးကို သုံးကြည့်လိုက်ပါ။
file size က 1.7MB လေးသာရှိပြီးတော့ android 2.3.3 ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
▼ === ▼ OR ▼ 1mobile.com ▼ OR ▼ usersfiles.com ▼
နာမည်ကြီး Next Launcher RubberGreen v-1.2.5 လေးပါ ဒီဇိုင်းလေး လန်းလို့ ဘော်ဒါတွေ
ကြိုက်မယ် ထင်လို့ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, December 30, 2014 No comments:
လူတိုင်း အကြိုက် တွေ့စေမဲ့ TSF Shell Patch
ဒီနေ့တော့ ဦးလေးကြီး တင်ပေးမှာ ကတော့ လူတိုင်း နှစ်သက်တဲ့ TSF Launcher 3D Shell
apk လေး တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗားရှင်း အသစ်ဖြစ် သွားတာကြောင့် ပိုမို သစ်ဆန်းတဲ့ အထိအတွေ့ တွေကို သင်ကိုယ်တိုင် ခံ
စားလိုက်ပါ။ သူများနဲ့ မတူ တမူထူခြား ချင်ရင်တော့ ဒီ TSF Launcher 3D Shell apk လေးကို
3D Enable (အထောက်ကူ) ပြုပေးတဲ့ multipul - operation, including auto - arragement,
multipul - choices, add - to - folder, multipul-deleting, စသည် တို့ကို finger (လက်ချောင်း
) ဖြင့်လည်း only one move (တခုထဲ အဖြစ်လည်း အဆိုပြုနိုင် ပါသေးတယ်)
ဖိုင်းများ ကိုလည်း various (အမျိုးမျိုး) ways (လမ်းကြောင်း) မှန်အောင် check (သေချာအောင်
စစ်ပေးပါသေးတယ်တယ်) app page and4အထိကို မိမိ lower and corner အောက်နှင့် ထောင့်
စွန်းများ လက်ဖြင့် ထောက်ရှောက် ဆွဲယူပြီး 3D စတိုင်းလ် ပုံရိပ်ဖြင့် လည်းကောင်း ပုံဖော်ပြီး
aသ်ာလည်း သင်လက်တွေမှာ ထိတွေ့လို့ ရပါသေးတယ်။
TSF Shell 3Dကို sideဖြင့် widgets, including folders, contacts, music player, weather စ
သည်တို့ကို သင့်တို့ပုံစံ အမျိုးမျိုးဖြင့် ထိတွေ့လို့ ရပါသေးတယ်။
ကျန်ရှိတဲ့ အပို apk များကို ဒီ Launcher လေးထဲမှာဘဲ သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရာများကို ထပ်ပြီး
Down ယူလို့ ရပါသေးတယ်။ some themes တချို့ themes တွေ အတွက်တော့ powerful theme
function ဖြင့်ဖော်ပြပေး ထားပါတယ်။
ဦးလေးကြီးကတော့ difference in style ကို ပိုနှစ်သက် ပါတယ်။ ဘာလိုလည်း ဆိုတော့ ပိုမို
ခန့်ငြားမိလို့ပါ ဦးလေးကြီး ကတော့ သူပေးထားတဲ့ မူရင်း theme လေးကိုပဲ အသုံးပြု စေချင်
ဘာလိုလည်းဆိုတော့ အမြင်ဆန်းလို့ပါ ကျန်ရှိတဲ့ themeတွေ change ချင်ရင်တော့ ထပ် ဒေါင်း
From: Pyae Phyo (MMiTD) by ဦးအာကာ -ဦးလေးကြီး